Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.5.5 Iva anekutita
Iyo kukurudzira kuva nemitemo inoshanda kune tsvakurudzo dzose dzinotsanangurwa mubhuku rino. Mukuwedzera kune huwandu hukuru hwehutsika-hunokurukurwa muchitsauko 6-mamwe mimwe mitemo yemitemo inomuka munyaya yekushanda pamwe nekushanda pamwe chete, uye sezvo kubatana kukuru kwakave zvitsva pakutsvakurudza kwehupfumi, zvinetso izvi zvingave zvisiri pachena pakutanga.
Mumabasa ose ekubatanidza mashoma, nyaya yekubhadhara uye chikwereti zvakaoma. Semuenzaniso, vamwe vanhu vanofunga kuti hazvina maturo zvekuti zviuru zvevanhu zvakashanda kwemakore pamusoro peNetflix Prize uye pakupedzisira havana kugamuchira mari. Saizvozvowo, vamwe vanhu vanofunga kuti hazvina maturo kubhadhara vashandi pamakambani emakambani emabasa akawanda zvikuru mari yakawanda. Mukuwedzera kune nyaya idzi dzekubhadhara, pane nyaya dzakabatana dzekwereti. Ko vose vanozobatanidzwa mukubatana kwemazana vari vanyori vekupedzisira mapepa esayenzi here? Mishonga yakasiyana inotora nzira dzakasiyana. Mamwe mapurogiramu anopa kubhadhara chikwereti kune nhengo dzose dzekubatana kukuru; somuenzaniso, munyori wekupedzisira wepepa rekutanga reFoldit aiva "Foldit vatambi" (Cooper et al. 2010) . Mumhuri yeGalaxy Zoo yemapurogiramu, vanobatsira zvikuru uye vanokosha vanopa dzimwe nguva vanokokwa kuti vashandise pamapepa. Semuenzaniso, Ivan Terentev naTim Matorny, vatori vechikamu vaviri veRadio Galaxy Zoo, vaiva mazano kune rimwe remapurisa akabuda kubva purojekiti iyoyo (Banfield et al. 2016; Galaxy Zoo 2016) . Dzimwe nguva zvirongwa zvinongobvuma chete michero pasina kubatana. Zvisarudzo pamusoro pekugadzirisa hurumende zvicharamba zvichisiyana kubva kune imwe nyaya kuenda kune imwe nyaya.
Vhura nhare uye kugovera kudhonza deta kunogonawo kumutsa mibvunzo yakaoma pamusoro pemvumo uye yega. Semuenzaniso, Netflix yakabudiswa vatengi vemavhidhiyo mafirimu kune vose. Kunyange zvazvo kuongororwa kwemafirimu kungave kusingaoneki kwakanakira, vanogona kuzarura ruzivo pamusoro pevatengi 'zvido zvezvematongerwo enyika kana kuti zvepabonde, ruzivo rwandinotengeswa nevatengi kuti vaite pachena. Netflix akaedza kunyora deta kuitira kuti zvikwereti zvisingakwanisi kuiswa kune chero munhu chaiwo, asi masvondo mashomanana mushure mekusunungurwa kweDetflix data yaive yakatorwazve neArvind Narayanan naVitaly Shmatikov (2008) (ona chitsauko 6). Zvakare, pakugovera dhikanhau rekuunganidza, vatsvakurudzi vanogona kuunganidza dhesi pamusoro pevanhu vasina kubvumirwa. Somuenzaniso, muMalawi Journals Projects, kukurukurirana pamusoro pehurukuro yakaoma (AIDS) yakanyoreswa pasina kubvumirwa kwevatori vechikamu. Hapana chimwe chezvinetso izvi zvetsika hazvikwanisiki, asi zvinofanira kutaridzirwa muchikamu chekugadzirwa kweprojekti. Yeuka, "boka rako" rinoumbwa nevanhu.